အရပွေား အပျေါကခွပျဝတျအခှံ ဝမျးဗိုကျ အကုနျတှဲပါလြှကျသားအနအေထားနဲ့ လတျတလော တူးတှခေဲ့တဲ့ ဒိုငျနိုဆောမမ်မီ(ရုပျသံ) – Nyi Ma Lay
အရပွေား အပျေါကခွပျဝတျအခှံ ဝမျးဗိုကျ အကုနျတှဲပါလြှကျသားအနအေထားနဲ့ လတျတလော တူးတှခေဲ့တဲ့ ဒိုငျနိုဆောမမ်မီ(ရုပျသံ)
By Nyi Ma LayPosted on September 15, 2021 September 15, 2021
ဒီဂွိုဟျကမ်ဘာပျေါမှာတော့ ဒီတဈခုထဲတှကွေ့ဖူးတဲ့ ဒိုငျနိုဆောမမ်မီ The only dinosaur ‘mummy’ ever found on this planet. ဒိုငျနိုဆောမမ်မီ လို့ချေါတာက တအား ထူးဆနျးနတော… ဒါနဲ့ဆကျဖတျဖွဈပွီး ဘာသာပွနျေ ပးလိုကျတယျ… အောကျမှာဆကျဖတျ..
“🐊ဒိုငျနိုဆောမမ်မီ 🐊” ဆိုတဲ့နာမညျတငျမကဘူး “ဒိုငျနိုဆောတို့ရဲ့မိုနာလီဆာ.”…လို့လညျးအမညျရပွနျသေးတယျ…. စိတျဝငျစားစရာကွီး….
သူ့ကို ကြောကျသားထဲကနေ စိတျရှညျလကျရှညျ နာရီ ၇၀၀၀ကွာအောငျ ဖျောထုတျသနျ့စငျပေးတဲ့ ပညာရှငျ” မာ့ချ မဈရှဲလျ ” ကိုအစှဲပွုပွီး ” နိုဒိုဆော ဘိုရီယယျလိုပယျလျတာမာ့ချ မဈရှဲလျ “nodosaur Borealopelta markmitchelli လို့လညျး ချေါပွနျသေးတယျ။
“ကနြျောတို့က အရိုးစုကိုတှတေ့ာမဟုတျဘူးဗြ ဒိုငျနိုဆော ရှငျနတေုနျးကအတိုငျးပုံမပကျြကွီးတှလေိုကျတာ” လို့ သုတသေီတဈယောကျကဆိုတယျ။ တှဖေူ့းသမြှထဲ အကောငျးအတိုငျး ထိနျးသိမျး ထားတဲ့အ နအေထားအရှိဆုံးဖွဈကာ အရပွေား၊ အပျေါကခွပျဝတျ အခှံ၊ ဝမျးဗိုကျပိုငျးစ တာတှေ အကုနျတှဲပါလြှကျသားအနအေထားနဲ့ရှိနတေဲ့အတှကျ အရိုးတှကေိုမတှရေ့တာပါ။
နိုဒိုဆော လို့ချေါတာက ခွပျဝတျအခှံပါတဲ့ ဒိုငျနိုဆော ဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယျပါ..
သကျတနျး နှဈ ၁၁၀ သနျးရှိတဲ့သူ့ကို ကနဒေါက သယံဇာတတူးဖျောရေးမိုငျးတှငျးတဈခုမှာ တူးဖျောရေးသမားတှကေမတျောတဆတူးတှခေဲ့ကွတာပါ။ ဒိုငျနိုဆော ရှငျနတေုနျးက အတိုငျးပုံမပကျြွ ကီးအရပွေား၊ အပျေါကခွပျဝ တျအခှံ၊ ဝမျးဗိုကျ ပိုငျးစတာတှေ အကုနျတှဲပါလြှကျ သားအ နအေထားနဲ့ရှိနတေဲ့အတှကျ ကွောငျ့သူ့ကို “🐊ဒိုငျနိုဆောမမ်မီ 🐊” လို့ချေါရတာပါ။ အရငျကဒါမြိုးတဈခါမှမမွငျဖူးဘူးတဲ့။
” မကျြစလေ့ေွး ဖတျကနဲ့မှိတျပွီးပွနျ ဖှငျ့ကွညျလိုကျရငျ ကိုယျ့ရှတေ့ငျ ဒိုငျနိုဆောအရှငျတဈ ကောငျအိပျပြျော နသေလားထငျ ရတယျ”လို့ သုတသေီတဈယောကျကဆိုပါတယျ။
သံခွပျကား ကားတဈစီးလိုဖှဲ့စညျးထားတွာေ ကာငျ ခုအသဈတှမြေို့းစိပျကို နိုဒိုဆောလို့အမ ညျပေးထားတယျ ။ ဆူးခြှနျတှေ ခွပျပွားတှဖေုံးထားတဲ့ ဒိုငျနိုဆောဟာ လေးခြောငျးထောကျ အရှကျစားမြိုးစိပျဖွဈပါတယျ။ အကွမျးဖငျြး ပေါငျ၃၀၀၀လောကျလေးမယျ။တှေးကွညျလို့ရအောငျပွောရရငျ ရုပျကွှငျးရဲ့လကျရှိအလေးခြိနျက ပေါငျ၂၅၀၀ဖွဈပါတယျ။
မူရငျးကကုနျးပျေါ မှာအရှကျစားနရေငျးရုတျတရကျေ သဆုံးပွီးမွဈရေ ထဲကပြါသှားပွီးပငျလယျ သမုဒ်ဒရာဆားငံ ရကွေမျးပွငျနုနျးတှဆေီ ရောကျသှားကာမပြ ကျမစီးဖွဈသှား တာမြိုးပါ။
သူ့ကို ကြောကျသားထဲ ကနပေုံပျေါထှကျ လာအောငျ စိတျရှညျလကျ ရှညျ နာရီ ၇၀၀၀ ကွာဖျောထုတျ သနျ့စငျပေးတဲ့ ပညာရှငျ” မာ့ချ မဈရှဲလျ “ကလုပျပေးပွီးတဲ့နောကျ
အရပွေား အရောငျ တှသေိအောငျလညျး ကွိုးစားခဲ့ကွပွနျ သေးတယျ ။
ရောငျစဉျဖျော နညျးပညာတှေ mass spectrometry techniques သုံးပွီး နဂိုကရှိနမေ ညျ့အရောငျကို ဖျောထုတျရာ အထကျဖကျက နီညိုရောငျရငျ့ရငျ ဘေးဖကျနဲ့အောကျဖကျကခပျဖြော့ဖြော့ ရှိမယျလို့ဖျောထုတျ တှလေ့ာ တယျ။ အရောငျဟာအရှကျစားသတ်တဝါတှေ အနနေဲ့ သူတို့ကိုစားမညျ့ သားရဲရိုငျးေ ကာငျကွီးတှရေဲ့အန်တ ရာယျကနကောကှယျပေးတဲ့အ ရာတဈမြိုး လညျးဖွဈပါတယျ။
သိပ်ပံသမိုငျးမှာခု ထိတှဖေူ့းသမြှထဲ အကောငျးပကတိအ တိုငျးထိနျးသိမျးထား တဲ့အနအေထား အဖွဈအရှိဆုံး လှလညျးအ လှဆုံး ဒိုငျနိုဆော ဖွဈတာကွောငျ့ သူ့ကို “ဒိုငျနိုဆော တို့ရဲ့မိုနာလီဆာ.”.လို့ချေါလိုကျကွမယျတဲ့ မကွာခငျပွတိုကျမှာ လူထုကွညျ့လိုရအော ငျလုပျေ နကွပါပွီ။
ဒီဂြိုဟ်ကမ္ဘာ​ပေါ်မှာ​တော့ ဒီတစ်ခုထဲ​တွေ့ကြဖူးတဲ့ ဒိုင်နို​ဆောမမ္မီ The only dinosaur ‘mummy’ ever found on this planet. ဒိုင်နို​ဆောမမ္မီ လို့​ခေါ်တာက တအား ထူးဆန်း​နေတာ… ဒါနဲ့ဆက်ဖတ်ဖြစ်ပြီး ဘာသာပြန်ေ ပးလိုက်တယ်… ​အောက်မှာဆက်ဖတ်..
“🐊ဒိုင်နို​ဆောမမ္မီ 🐊” ဆိုတဲ့နာမည်တင်မကဘူး “ဒိုင်နို​ဆောတို့ရဲ့မိုနာလီဆာ.”…လို့လည်းအမည်ရပြန်​သေးတယ်…. စိတ်ဝင်စားစရာကြီး….
သူ့ကို ​ကျောက်သားထဲက​နေ စိတ်ရှည်လက်ရှည် နာရီ ၇၀၀၀ကြာ​အောင် ​ဖော်ထုတ်သန့်စင်​ပေးတဲ့ ပညာရှင်” မာ့ခ် မစ်ရှဲလ် ” ကိုအစွဲပြုပြီး ” ​နိုဒို​ဆော ဘိုရီယယ်လိုပယ်လ်တာမာ့ခ် မစ်ရှဲလ် “nodosaur Borealopelta markmitchelli လို့လည်း ​ခေါ်ပြန်​သေးတယ်။
“ကျ​နော်တို့က အရိုးစု​ကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဗျ ဒိုင်နို​ဆော ရှင်​နေတုန်းကအတိုင်းပုံမပျက်ကြီး​တွေလိုက်တာ” လို့ သု​တေသီတစ်​ယောက်ကဆိုတယ်။ ​တွေ့ဖူးသမျှထဲ အ​ကောင်းအတိုင်း ထိန်းသိမ်း ထားတဲ့အ ​နေအထားအရှိဆုံးဖြစ်ကာ အ​ရေပြား၊ အ​ပေါ်ကခြပ်ဝတ် အခွံ၊ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းစ တာ​တွေ အကုန်တွဲပါလျှက်သားအ​နေအထားနဲ့ရှိ​နေတဲ့အတွက် အရိုး​တွေကိုမ​တွေ့ရတာပါ။
နိုဒို​ဆော လို့​ခေါ်တာက ခြပ်ဝတ်အခွံပါတဲ့ ဒိုင်နို​ဆော ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ..
သက်တန်း နှစ် ၁၁၀ သန်းရှိတဲ့သူ့ကို က​နေဒါက သယံဇာတတူး​ဖော်​ရေးမိုင်းတွင်းတစ်ခုမှာ တူး​ဖော်​ရေးသမား​တွေက​မ​တော်တဆတူးတွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ ဒိုင်နို​ဆော ရှင်​နေတုန်းက အတိုင်းပုံမပျက်ြ ကီး​အ​ရေပြား၊ အ​ပေါ်ကခြပ်ဝ တ်အခွံ၊ ဝမ်းဗိုက် ပိုင်းစတာ​တွေ အကုန်တွဲပါလျှက် သားအ ​နေအထားနဲ့ရှိ​နေတဲ့အတွက် ​ကြောင့်သူ့ကို “🐊ဒိုင်နို​ဆောမမ္မီ 🐊” လို့​ခေါ်ရတာပါ။ အရင်ကဒါမျိုးတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူးတဲ့။
” မျက်​စေ့​လေြး ဖတ်ကနဲ့မှိတ်ပြီးပြန် ဖွင့်ကြည်လိုက်ရင် ကိုယ့်​ရှေ့တင် ဒိုင်နို​ဆောအရှင်တစ် ​ကောင်အိပ်​ပျော် ​နေသလားထင် ရတယ်”လို့ သု​တေသီတစ်​ယောက်ကဆိုပါတယ်။
သံခြပ်ကား ကားတစ်စီးလိုဖွဲ့စည်းထားတာြေ ကာင် ခုအသစ်​တွေ့မျိုးစိပ်ကို နိုဒို​ဆောလို့အမ ည်​ပေးထားတယ် ။ ဆူးချွန်​တွေ ခြပ်ပြား​တွေဖုံးထားတဲ့ ဒိုင်နို​ဆောဟာ ​လေး​ချောင်း​ထောက် အရွက်စားမျိုးစိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်း ​ပေါင်၃၀၀၀​လောက်​လေးမယ်။​တွေးကြည်လို့ရ​အောင်​ပြောရရင် ရုပ်ကြွင်းရဲ့လက်ရှိအ​လေးချိန်က ​ပေါင်၂၅၀၀ဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းကကုန်း​ပေါ် မှာအရွက်စား​နေရင်းရုတ်တရက်ေ သဆုံးပြီးမြစ်​ရေ ထဲကျပါသွားပြီးပင်လယ် သမုဒ္ဒရာဆားငံ ​ရေကြမ်းပြင်နုန်း​တွေဆီ ​ရောက်သွားကာမပျ က်မစီးဖြစ်သွား တာမျိုးပါ။
သူ့ကို ​ကျောက်သားထဲ က​နေ​ပုံပေါ်ထွက် လာ​အောင် စိတ်ရှည်လက် ရှည် နာရီ ၇၀၀၀ ကြာ​ဖော်ထုတ် သန့်စင်​ပေးတဲ့ ပညာရှင်” မာ့ခ် မစ်ရှဲလ် “ကလုပ်​ပေးပြီးတဲ့​နောက်
အ​ရေပြား အ​ရောင် ​တွေသိ​အောင်လည်း ကြိုးစားခဲ့ကြပြန် ​သေးတယ် ။​
ရောင်စဉ်​ဖော် နည်းပညာ​တွေ mass spectrometry techniques သုံးပြီး နဂိုကရှိ​နေမ ည့်အ​ရောင်ကို ​ဖော်ထုတ်ရာ အထက်ဖက်က နီညို​ရောင်ရင့်ရင် ​ဘေးဖက်နဲ့​အောက်ဖက်က​ခပ်ဖျော့​ဖျော့ ရှိမယ်လို့​ဖော်ထုတ် ​တွေ့လာ တယ်။ အ​ရောင်ဟာအရွက်စားသတ္တဝါ​တွေ အ​နေနဲ့ သူတို့ကိုစားမည့် သားရဲရိုင်းေ ကာင်ကြီး​တွေရဲ့အန္တ ရာယ်က​နေကာကွယ်​ပေးတဲ့အ ရာတစ်မျိုး လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သိပ္ပံသမိုင်းမှာခု ထိ​တွေ့ ဖူးသမျှထဲ အ​ကောင်းပကတိအ တိုင်းထိန်းသိမ်းထား တဲ့အ​နေအထား အဖြစ်အရှိဆုံး လှလည်းအ လှဆုံး ဒိုင်နို​ဆော ဖြစ်တာ​ကြောင့် သူ့ကို “ဒိုင်နို​ဆော တို့ရဲ့မိုနာလီဆာ.”.လို့​ခေါ်လိုက်ကြမယ်တဲ့ မကြာခင်ပြတိုက်မှာ လူထုကြည့်လိုရ​အော င်လုပ်ေ နကြပါပြီ။
Previous post ကလေးတှေ လိမ်မာယဉျကြေးပီး ဉာဏျကောငျးဖို့ ပွငျသဈမိဘတှေ ပွုလုပျကွတဲ့ အခကျြ (၉) ခု
Next post ဈေးကှကျ လကျဝါးကွီးအုပျမှုဖွငျ့ Google ကို ဒျေါလာသနျး ၁၈၀ နီးပါး ဒဏျရိုကျလိုကျတဲ့ တောငျကိုရီးယား